काठमाडौं : नेपाली समाज सबैभन्दा प्रभावित हुने चाड हो– बडा दशैँ । देशका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले मनाउने यो पर्वले झण्डै १५दिनसम्म सिङ्गो देश प्रभावित हुन्छ।
देशको न्यायपालिका १५ दिन बन्द हुन्छ । शिक्षण संस्था पनि १५ दिन बन्द हुन्छ । नेपालीले गर्ने काम कम्तिमा पनि एक महिनाअघिदेखि नै ‘अब दशैँपछि’ भनेर थन्क्याउने चलन छ।
देशको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रले एक साताभन्दा लामो समय कुनै काम गर्दैन । धेरैजसो नेपाली सकेसम्म ठूलाबडाको हातबाट टीका ग्रहण गर्न जान्छन् । सकेसम्म बाबुआमासँगै दशैँ मनाउन चाहन्छन्।
देश सञ्चालन गर्ने प्रमुख दलका शीर्षनेताहरूले चाहिँ देशै प्रभावित गर्ने बडा दशैं कसरी मनाउँछन् त ? यो पनि आम चासोको विषय हो।
भौतिकववादी काँग्रेस र आध्यात्मिकता पछ्याउने कांग्रेका नेताहरूबीच दशैँ मनाउने शैलीमा अन्तर पो छ कि ? अथवा, नेपालका लोकतन्त्रवादी कम्युनिष्टहरूले परम्परागत ढंगले नै मनाउँछन्, यो पनि चासोको विषय छ।
नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसपालिको दशैँ सदाझैँ काठमाडौंमै मनाउने छन् । उनी नवमीका दिन गृहजिल्ला झापा जानेछन् । उनले दमकमा चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्नेछन् । सोही दिन काठमाडौं आउने उनले गत वर्षजस्तो यसपालि कार्यकर्तालाई टीका लगाइदिने छैनन् । पिताका हातबाट टीका ग्रहण गर्ने ओलीले पत्नी राधिका शाक्य, भतिजा राजेश बज्राचार्यलाई टीका लगाइदिने छन् । आफूले ‘छोरी’ का रुपमा पढाएका र बिहेदान गरिदिएका केही जोडी छोरीज्वाइँलाई भने उनले टीका लगाइदिने छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको भने यो पल्ट दशैँ छैन । उनले विजयादशमीका दिन टीका लगाउन आउने नेता–कार्यकर्तालाई निवासमै लगाइदिने योजना थियो, तर देउवाको सचिवालयले जानकारी दिए अनुसार नजिकका नातेदारको निधनले गर्दा जुठो परेकोले उनले दशैं नमनाउने भएका हुन् ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दशैं परिवारकै साथ मनाउने छन् । उनले भने दशैंको टीका आफू पनि लगाउँदैनन् र अरुलाई पनि लगाइदिने गरेका छैनन् । माओवादी सशस्त्र विद्रोहदेखि नै टीका लगाउन छाडेका उनले दशैँ भने पारिवारिक जमघटका साथ मनाउँदै आएका छन्।
माओवादी सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेका समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने पितासँग दशैँको टीका लगाउने गरेका छन् । उनी आफ्ना पितासँग विजयादशमीको टीका लगाउँछन् तर आफू चाहिँ छोरी मानुषी, पत्नी हिसिलालाई समेत दशैंको टीका लगाइदिँदैनन्।
आफ्नो बडादशैँ र टीकाबारे उनले केही दिनअघि ट्वीट गरे, ‘बडादशैँ लगायतका चाडपर्वलाई मैले रमाइलो सांस्कृतिक पर्वको रूपमा मनाउँदै आएको छु! दशैंमा बुबाको हातबाट टीका र तिहारमा दिदी र बहिनीको हातबाट टीका ग्रहण गर्ने गरेको छु । यस वर्ष पनि गर्ने छु तर मैले अरूलाई टीका लगाइदिने गरेको छैन ! तसर्थ कार्यकर्तालाई टीका लगाउने छैन !’
अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले यसपटकको दशैँ काठमाडौंमै मनाउने छन् । घरपरिवारमा टीका लगाउने उनले घरमा आउने नेता–कार्यकर्तालाई पनि टीका–जमरा लगाइदिने छन् । दशैंको टीकापछि भने उनी गृहजिल्ला इलाम जाने छन्, त्यहाँ आयोजना हुने केही कार्यक्रममा सहभागी हुन ।
नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले यसपटकको दशैँ काठमाडौंको कोटेश्वरमै मनाउने छन् । नेपालका भाञ्जा समेत रहेका स्वकीय सचिव नितेष पौडेलका अनुसार, उनले दशैंको टीका भने दाजु (ठूलो बुबाका छोरा) विजयकुमार उपाध्यायसँग लगाउने छन् । त्यसपछि पत्नी गायत्रीलगायत परिवारलाई उनले टीका लगाइदिने छन् । त्यसपछि उनले पनि टीका लगाउन आउने पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई लगाइदिने कार्यक्रम छ।
Published Date: Monday, 7th October 08:56:08 AM